Barnaamijka Kaalmada Biyaha ee Qoyska Dakhliga Yar (LIHWAP) - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Caawinaadda Utility|Barnaamijka Kaalmada Biyaha ee Qoyska Dakhliga Yar (LIHWAP)
Barnaamijka Kaalmada Biyaha ee Qoyska Dakhliga Yar
Kaalmada biyaha Washington waxaa lagu bixiyaa Barnaamijka Caawinta Biyaha Qoyska ee Dakhliga Yar (LIHWAP) waxayna bixisaa lacago lagu kaalmeeyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo biilasha biyaha iyo biyaha wasakhda ah ee jaray ama ku jira halis dhow in laga gooyo.
LIHWAP wuxuu siiyaa kaalmo degdeg ah qoysaska dakhligoodu yar yahay ee jaray ama ku jira halis ugu dhow in laga gooyo.
LIHWAP wuxuu siiyaa kaalmo biyo ah qoysaska ku nool Washington iyada oo loo marayo isla shabakadaha hay'adaha wax-qabadka bulshada iyo la-hawlgalayaasha maxalliga ah ee bixiya Barnaamijka Kaalmada Tamarta Guriga Dakhliga Yar (LIHEAP). Ururadan maxaliga ah ayaa kaa caawin doona go'aaminta haddii aad u -qalanto iyo inta caawimaad ee aad heli karto. Haddii aad u qalanto, wakaaladda xaafaddaada ayaa si toos ah lacag ugu soo diri doonta adeegga biyaha adiga oo metelaya qoyskaaga.
Qoysaska u qalma kaalmada biyaha ayaa iyagana u qalma Barnaamijka Kaalmada Tamarta Guriga ee Dakhliga Yar.
U qalmida Barnaamijka
U -qalmitaanka wuxuu ku salaysan yahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan dakhliga qoyska, biyaha la cabbo, iyo kharashyada bullaacadaha. U -qalmitaanka qoyska iyo dakhliga waxay la mid yihiin kuwa Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga Hoose (LIHEAP), eeg kuwa tilmaamaha u -qalmitaanka halkan. La xiriir wakaalada Kaalmada Biyaha adiga oo gujinaya khariidada hoose si aad u codsato caawimaad.
Si aad u codsato kaalmada biyaha, waa inaad ballan ka samaysataa ururka bixiya adeegyada deegaankaaga.
Riix halkan ama khariidada hoose si aad u aragto khariidada degmada oo aad doorato degmada aad ku nooshahay. Taasi waxay ku tusi doontaa macluumaadka xiriirka wakaaladda ee aaggaaga iyo tilmaamaha jadwalka ballanta.
FIIRO GAAR AH: Ganacsigu ma go'aaminayo u-qalmitaanka ama deeqaha abaalmarinta ee qoysaska.
OCS LIHWAP Bogga (shabakad)
Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga Hoose
Bogga Gargaarka Macmiilka Biyaha DSHS
Bogga Caawinta Adeegga Ganacsiga
Washington Qorshaha Hirgelinta Deeqaha Barnaamijka Caawinta Biyaha Qoyska ee dakhliga-hooseeya (PDF)